Oniversiten’i Barikadimy Mitaky ny hialan’ny minisitra ireo mpianatra
Fanadinana CEPE SY BEPC Mitohy ny fanomanana
Mitohy ny asa fanomanana ny fanadinam- panjakana toy ny CEPE sy ny BEPC amin’izao fotoana izao na dia mbola tsy voafaritra mazava aza ny daty hanatanteraka izany.
Sekolim-panjakana Efitrano fianarana 476 no hatsangana amin’ity taona ity.
EPP 30 isa, CEG 08 ary liseam-panjakana 06 no natsangana ny taona 2019. Tanjona ho amin’ny taona ity dia EPP manarapenitra 30 no hatsangana. Ny Distrika 119 manerana ny nosy koa dia hananganana efitrano fianarana (salle de classe) efatra avy.
Fandriana Mitsinjo ny mpianatra ao aminy ireo mpanabe
Mitsinjo ny tanora ao aminy ny mpanabe any Fandriana Faritra Amoron’i Mania. Hanomboka tsy hoela eto Fandriana ny « COURS SPECIALES » homena an'ireo mpianatra hiatrika fanadinana Bacc sampana ankapobeny sy sampana teknika ka nisafidy ny « serie » siantifika.
Lozam-pifamoivoizana teny Antsahabe Nidoboka am-ponja vonjimaika ilay mpamily
Taorian'ny lozam-pifamoivoizana niseho tetsy Antsahabe ny sabotsy hariva lasa teo izay naharatrana olona roa sy namoizana ain’olona roaizay tovolahy sy tovovavy
Fanabeazana Ho fantatra tsy ho ela ny datim-panadinana
Nivoaka tamin’ny fahanginana Atoa Herimanana Razafimahefa, sekretera jeneraly eo anivon’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena taorian’ny fidradradran’ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra sy ireo sendika maro samihafa mikasika ny tokony hamoahan’ny fanjakana haingana ny daty hanatanterahana ny fanadinam-panjakana toy ny CEPE, ny BEPC….
Fanadinana CEPE sy BEPC Efa milamina ny laza adina amin’ny ankapobeny
Efa milamina tanteraka ny laza adina ho an’ny fanadinam-panjakana CEPE manerana ny Nosy raha araka ny fanazavan-dRtoa ministra mpisolo toerana ny profesora Assoumacou.
Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena “Mitohy ny fandraisana FRAM ho mpiasam-panjakana”
Efa niverina mianatra avokoa ireo kilasy manala fanadinana ary tianay ny manamarika fa tsy maintsy hisy ny fanadinam-panjakana, hoy ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana teknika. Eo an-dalam-pikarakarana tanteraka isika,
Nidina an-dalambe nilanja sora-baventy omaly maraina ireo mpianatra ao amin’ny oniversiten’i Barikadimy ao Toamasina.
Nitaky ny hamoahana ny vatsim-pianarana 5 volana izay mbola tsy noraisiny izy ireo. Nangataka ny hanomezana tosika fameno sy vatsy Tsinjo azy koa izy ireo noho ny fahasahiranany no sady nitaky ny hanalana ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony izay nambaran’izy ireo fa mpanavakavaka. Nifanindry an-dalana tamin’ny fandoroana kodiarana teny amin’ny arabe izany. Tsiahivina moa fa mpianatra tsy afaka namonjy fodiana noho ny fiparitahan’ny valanaretina Covid 19 ireto nanao hetsika ireto. Nahare izany ireo tompon’andraikitra any an-toerana ka omaly folakandro ihany dia tonga nanatitra fanampiana ho an’ireo mpianatra toy ny vary sy menaka ary fitaovana izay natokana ho azy ireo.